Gumaata Kaampaasii 11: Kaayyoo qabaannaan ilaalchi boodatti hafaan nama hin gufachisu - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Alimaa Jibiriil Huseen (PhD)
Milkaa'inni waan akka tasaa dhufu waan hintaaneefu cimanii hojjachuun kaayyoo ofii fiixaan baasuuf akka dandeessisu muxannoo keessummaa keenya har'aa irraa qabatamaan hubatama.
Keessummaan Gumaata Kaampaasii keenya kan har'aas muxannoo jireenyaafi mana barnootaa ishee akka itti aanu kanatti maqaasaanii irraa eegaluun nuuf qoodaniiru:
Maqaan koo Alimaa Jibiriil Huseen (PhD) jedhama. Kanana dhaladhee guddadhe Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyanaa magaalaa Ayyaanaatti. Barnoota koo sadakaa tokkooffaa fi lammaffaa magaaladhuma sanattiin xumure.
Barnoota koo kutaa 1ffaa irraa hanag kutaa 12ffaa keessatti mudannoowwan nama gaddisiisaniifi nama gammachiisan hedduun na mudataniiru.
Barnoota ilaalchisee maatiin koo kan hin baratiin waan ta'aniif waa'ee faayidaa barnootaa wallaaluu irraan kan ka'e yookan ammoo dubartiin barattee sadarkaa kamirrayyu hin geessu jedhu qabu turan.
Fedhii malee heerumsiisuu
Maatiin koo dubartoota baratanii milkaa'an akka fakkeenyaatti ilaalan naannoo sana irraa dhibuu kan walqabate natti fakkaata, sadarkaa 1ffaa ykn kutaa 6ffaa akkuman xumureen fedhii koo malee akkan heerumu na taasisan.
Haata'u malee, barnootaan cimtuu waanan tureef, barsiisonni yeroo sana turaniifi bulchiisonni hanga aanaa sanaatti turan na beeku ture.
Abbaa koo waamanii akka inni na heerumsiisuu dhiisee na barsiisu dirqisiisanii turan. Abbaan koo garuu na heerumsiisuu diduu hin dandeenye waan ta'eef osoon sadarkaa 1ffaa illee hin xumuriinan heerume.
Bara sana ministiriin kutaa 6ffaa irratti ture. Anis akkuman ministirii kutaa 6ffaa fudhadhee guun dirqamaan heerume. Kutaa 6ffaa irraa ministirii qoramee qabxii 99.6 galmeesiseen gara kutaa 7ffaatti darbe.
Ammallee barnoota addaan hin kunne. Abbaan koos deebiyee akka garaa laafuu ta'e. Harmeen koos gara dhumaa irra yaada koo yeroo ilaaltu, galgalaafi ganama gadda koofi boo'icha koo yeroo hubattu, deebii'anii waan godhan wallaalan.
Cidha qopheessanii nama heerumsiisunis akka waan guddaatti ilaalama ture. Dubartiin barattee eessa geessi yaadni jedhus isaan keessa jira. Kanaaf, osoo yaaduma kana keessa jiranii gaafan heerumuudhaaf ka'utti abbaa manaa koo waliin waliigalanii akka ani barnoota koo itti fufuu danda'u waadaa naaf seenanii heerume.
Image copyright Alimaa Jibiriil (PhD)
Barnoota ishee keessatti gahee abbaan manaa ishee qaban
Hunda caalaa barumsa koo keessatti gahee guddaa kan qabu abbaa manaa kooti. Sababiin isaas inni kutaa 7ffaa irraa kaasee amman sadarkaa kana ga'eetti rakkoo baayyee na waliin dabarseeti kan inni na barsiise.
Mormiin karaa maatii isaa, karaa namoota gara garaa isarratti ka'u, keessumaa dubartiin Musiliimaa erga heerumtee mana barumsaa deemuun akka waan Shari'aa cabsiteetti rakkoon gara garaa irra gahaa tureera.
Maatiin erga fuutee booda maaliif mana barumsaatti ishee ergita jechuudhaan dhiibbaa irraa geessisuun jireenya hawwaasummaa keessaa isa baasanii baayyee dhiphina guddaa keessa isa galchanii ture.
Inni garuu kana hunda danda'ee anaan na jajjabeessaa barumsa kootti na cimsee kana irraan na ga'eeera.
Mormiifi isa qoollifachuu sababii koorraa kan ka'een isa irra ga'u hunda dura dhaabbatee abbaan manaa koo ejjennoo isaa jalqabaa osoo hin diigiin osoo guyyaa tokko rakkoo ana irraan hin ga'iin hanga xumuraatti na deggeree kan na barsiise.
Abbaan manaa kiyyas barnoota koo keessatti dhiibbaa maatii isaa, dhiibbaa hawwaasa Musiliimaa naannoo sanaa danda'ee na gargaaruu isaatiinis sadarkaan barnoota ani galmeesisus gadi hin buune. Kutaa 8ffaa yeroon ministirii qorames 99.5 galmeesisuun qabxii ol-aanaa fideen darbe. Kutaa 9ffaa keessattis sadarkaanan darbe.
Kutaa 11ffaa yeroo baradhu ammoo jireenya gaa'elaa keessatti kan eegamuufi kan fidu ture. Mucaa koo ishee angafaa yeroon kutaa 11ffaa baradhun osoon guyyaa tokko barumsa koo irraa hin hafiin garaattis harkattis baadheen xumure.
Haadha daa'imaa ta'ee osoon jiruus sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa gadi bahee hin beeku. Kutaa 12ffaa yeroon baradhu ammoo mucaa ishee lammaffaan da'e.
Image copyright Aliimaa
Maatirkii kutaa 12ffaa fudhadhee booda qabxii dippiloomaatu naaf dhufe yeroo sanatti. Bara sana keessa qabxii dippiloomaa fiduu jechuun baayyee cimaadha. Barri isaas akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1988 ture, waggaa 23 dura jechuudha.
Yeroon kolleejjii galuuf jedhu mucaan koo isheen lammaffaa ji'a 6 turte. Daa'ima ji'a 6 dhiisanii kolleejjii deemuunis rakkoo dabalataa biroo natti ta'e.
Osoon ijoollee reefuu kana akkamiinan dhiisee deema jedhee dhiphadhu amma ammoo haadha kootu na gargaare.
Ani harmee koof angafa waanan ta'eef isheen ijoollummaa qabdi ture. Isheenis yeroo sana da'umsatti dhiyaatteetti waan ta'eef akkuman kollejjii galeen ji'a lama keessatti deesse.
Kanaaf, daa'ima kan koo harma tokko kan ofiishee ammoo harma isa kan biraa hoosistee guddiste.
Walumaagalatti daa'imman koo irra rakkoon tokkollee hin geenye. Abbaan manaa koos sirriitti qabee hangan kolleejjii baradhee xumurutti sirriitti qabataa ture.
Kollejjii xumuree bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barsiisuun eegale.
Osoo waggaa lama hin turiin deebii'ee barnoota digirii Yunvarsiitii Baahir Daarittin argadhe. Barnoota digirii koo xumuree yeroon deebii'us gara sadarkaa biraatti ce'uudhaaf dorgommii biraatu ture.
Dirqamni dubartummaa waa meeqa?
Dorgommii sana keessa yeroon turetti egaa dubartummaan waan baayyee qaba. Dubartummaan haadha ta'uun dirqamaa, dubartummaan haadha manaa ta'uun dirqama. Dubartummaan dhiibbaa karaa maatii, hawwaasaa, karaa uumamaanillee kan ishee qaqqabu waan hedduutu jira.
Ammas mucaa sadaffaa garaatti baadheen ture qormaata digirii lammaffaa (MA) kanan dorgome.
Dorgommii sanas milkaa'ee gaafan Digirii koo lammaffaadhaaf deemuuf ka'u daa'imni koo ji'aafi torban lama ture.
Daa'ima umurii kana irratti dhiisee hin deemu jedheen fudhadheen mana kireeffadheen digirii koo lammaffaa kana Yunvarsiistii Finfinneetti baradhee xumure.
Akkas ta'ee utuma jiruus qabxii bareedaatiinan eebbifame. Qabxii 3.79 akka muummee keenyaatti nama lammaffaa ta'e galmeesiseen eebbifame.
Ergan digirii koo Lamaffaa xumuree boodas yunvarsiitiiwwan bakka gara garaatti dorgomeen ture. Dorgimmii kanaanis adda durumaanan milkaa'e. Kanneen keessaa ammoo Yunvarsiitiin Wallaggaa filannoo koo jalqabaa waan ta'eef achittin ramadame.
Akkuman Yunvarsiitii Wallaggaatti hojii jalqabeen ammoo hojii baruufi barsiisuun alatti, hojiiwwan gara garaa irratti hirmaadheen ture.
Waggaa jalqabaa irratti Yunvarsiitii Wallagaa keessatti dhimmi dubartootaa irrattin hojjechaa ture. Hojiin dhimmi kana irratti keennaa ture keessaas, leenjii gara garaa kennaa, barattoota jajjabeessaa, kaan gorsaa kanan ture yommuu ta'u muuxannoo kan koollee akka gaariitti isaaniif kennaan ture.
Yoo cimanii kaayyoo qabaatan dubartiin kamiyyu dhiiraan olm alee dhiiraan gadi akka hin taane itti himaan ture.
Hirmaannaa koo kana ilaalanii waggaa tokkoon booda ammoo gara Diinii Barattoota Waliigalaa Yunvasiitii Wallaggaatti na guddisan. Achirras waggaa tokkoofan hojjedhe.
Yeroo sana keessatti waan baratootaa ilaalchisee rakkoon ture waan hedduudha. Hojiin isaa baayyee walxaxaadha. Namoonni 'hojiin kun hojii dhiiraadha, hojii dhiirattiyyu baayyee cimudha. Akkamittiin Diinii Barattootaa irratti si ramadu siin? Kan naan jedhaa turan hedduudha.
Animmoo ejjenoodhaan 'hojiin dhiira, dubartiidha jedhamee jiraa?' jedheen itti cime hojjechaa ture. Dhugumayyu ammoo akkuma isaan jedhan ani dubartii ta'ee badaa laata jedheen, sababii ani dubartii ta'eef bakki kun bade laata jedheen yeroo koo guutummaan guutuutti kenneen hojii gaariin hojjedhe. Jijjiirama gaarii galmeesise.
Waggaa tokkoon booda ammas hojii kootti gammadanii, baayyees ana ajaa'ibsiifatanii gara Dinnii Kollejjii Afaaniifi Joornaalizimii ta'een waggaa tokkon hojjedhe. Achi irrattis hojii gaariin hojjedhe.
Kanaan alattis hojiiwwan Yunvarsitichaa gara agraa keessatti hirmaadheen hojjechaa ture.
Ergan waggaa sadii Yunvarsiitii Walaggaa hojjedheen booda barnoota Digirii Sadaffaa (PhD)n Yunvarsiitii Finfinneettin jalqabe.
Ammas turtii waggaa 6 tiin booda Digirri Sadaffaa (PhD) koofi daa'ima koo afraffaa takkaamattin argadhe.
Bakkan ga'e kana keessatti maatiin irraa dhaladhe, hunda caalaa haadha koo, abbaafi obbolaan koo, abbaan manaa koo bakka ol aanaa qabu. Kaayyoo ani qabu fuula koo duratti arganii na tumsan.
Ijoolleen koos akkasuma. Ijoollee afran da'e keessaa lamaan isaanii yunvarsiitii barachaa jiru. Isheen angafni Konistiraakshin Tekinooloojiidhaan waggaa 4ffaa barataa waan jirtuuf barana eebbifamti. Isheen lamaffaa ammoo Narsingiidhaan waggaa lamaffaa barachaa jirti.
Ani yeroo hunda nan danda'an jedheen amana. Kaayyoon kaawwadha. Kaayyoo koo galmaa'an ga'achuudhaaf karooran qaba. Karoora koo irratti seetoodhaan nan hojjedha. Jireenya mana koo keessaa irraa jalqabee seeraa fi sirna ittiin bulanis nan qaba.
Gumaata Kaampaasii 10: Kaayyoo ofii dagannaan, soogidda bishaan waraabuu dhaqxe ta'uudha